Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 7,411 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
8 Jumada al-thani 1443 H
Geese geesoole .
Taariikhdu Maata Waa 11 Jannaayo 2022 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
1879 – waxaa dhacay dagaalkii u dhexeeyay Zuluga iyo Ingiriiska.
1922 – waxaa la sameeyay dawada macaanka ee loo yaqaano insulin.
1942 – Dagaalkii Labaad ee Aduunka: ciidamada Jabaan waxay qabsadeen Kuala Lumpur.
2013 – Askari Faransiis ah iyo 17 maleeshiyo ayaa ku dhintey Buulo Mareer
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 7,411 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin